Dulmarka Faa'iidooyinka Carewell - Carewell SEIU 503
Faa’iidooyinka Carewell SEIU 503
Carewell SEIU 503 waa qoyska tababarka iyo manfacyada adag ee ay bixiso SEIU 503 daryeelka guriga iyo bixiyeyaasha taageerada shaqsiyadeed iyo kalkaaliyeyaasha daryeelka shakhsi ahaaneed si kor loogu qaado noloshooda. Si cad loo bixiyay, si fudud oo la isku halleyn karo, kuwani waxay bixiyaan xasiloonida, caafimaadka, xirfadaha iyo shaqaalaha tababarka u qalma.
Caymiska loo maro Kaiser Permanente Dental oo bixiya inta badan adeegyada aasaasiga ah (sida nadiifinta ama buuxinta) adiga oo aan lacag kugu fadhiyin. Waxa kale oo aad leedahay caymis qayb ka mid ah adeegyada kale (sida marinnada xididka).
Aragtida iyo dheefta maqalka iyada oo aan lagaa rabin bil kasta.
Caawinaad iyo ilo – laga bilaabo caawinta canshuurahaaga ilaa la-talin bilaash ah – wax ka qabashada arrimaha saameeya shaqada, guriga, ama nolosha qoyska.
Macaashkaani wuxuu daboolayaa kharashka ceymiskaaga billaha ah ee u qalma qorshaha caafimaadka shaqsiyeed ee laga soo iibsaday Suuqa ama Medicare. Waxay sidoo kale daboolaysaa illaa $ 6,500 kharashyada caafimaadka ee jeebka ka baxsan ee sheegashooyinka hoos imanaya Medicare ama qorshaha caafimaadka ee Suuqa Suuqa ee u qalma.
Ilaa 40 saacadood sanadkii oo ah wakhti fasax ah (PTO), markaa waad ka nasan kartaa shaqada markaad u baahato.
Faa’iidada tijaabada ah ee COVID-19
Xaq ma u leedahay macaashka Carewell? Ku hel wax ka yar hal daqiiqo adoo adeegsanaya su’aalahayaga u-qalmitaanka.
Si aad xaq ugu yeelatid dheefaha Carewell, Xafiiska Maamulka ee Faa’iidooyinka waa inuu lahaadaa magacaaga, jinsigaaga, Lambarka Sooshiyaal Sikiyuuritiga, taariikhda dhalasho iyo cinwaanka hadda kujira faylka. Sidoo kale waa inaad hubisaa inay macluumaadkaagu la socdaan Gobolka.
Dhammaan shaqaalaha daryeelka guriga iyo shaqsiyaadka taageerada shakhsi ahaaneed ee u qalma inay ku helaan dheefaha Daryeel Daryeel, Aragti + Dhegeysi, iyo Barnaamijka Caawinta Shaqaalaha si toos ah ayaa loo daboolaa. Haddii aad xaq u leedahay laakiin aad rabto inaad ka baxdo waxtarradaan, fadlan buuxi foomka dhaafitaanka ee hoose. Hadaad go aansato si aad dib ugulaabanto dheefahaan, waxaad u baahan doontaa inaad qoraal ahaan ula xiriirto Xafiiska Maamulka Faa’idooyinka.
Haddii dalabkaaga macaashka ee Carewell SEIU 503 la diido gebi ahaan ama qayb ahaan (tusaale ahaan, codsigaaga magdhowga waa la diiday, ama waxaa lagugula talinayaa inaadan xaq u lahayn dheefaha), buuxi oo soo gudbi foomka soo socda iyo wixii taageerid ah qalabka.
Foomka Racfaanka U Qalmida iyo Lacag Celinta (Dijital ah)
Aaminaada Shaqaalaha Daryeelka Guryaha ee Oregon